ရပ်ဘီကမ္ဘာ့ဖလားတီရှပ် - Japan 2019- ဖက်ရှင်ရပ်ဂ်ဘီ
ကြိုဆို » ရှပ်အင်္ကျီရပ်ဘီကမ္ဘာ့ဖလား - ဂျပန် 2019
စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးဂန္: သင်ကဒီရိုးရှင်းပြီးဂန္တီရှပ်ခစျြလိမျ့မညျ။ ဂျပန်တွင်ကမ္ဘာ့အခွက်ကိုရပ်ဂ်ဘီစောင့်ကြည့်ဖို့ဝတ်ဆင်ရန်တစ်ဦးကအခြေခံ
ဆိုင် sexy ရပ်ဘီ သင်ကမ္ဘာ့ဖလားရပ်ဂ်ဘီအတိုင်းလိုက်နာရန်ပြီးပြည့်စုံသောပစ္စုပ္ပန်ကိုရှာဖွေကူညီပေးနေ။ ဒီနေရာတွင်ဥပမာ အမျိုးသားများအတွက်အဘို့ကို T-Shirt နှင့်တစ်ဒါဇင်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များကိုရရှိနိုင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး!
ဤရွေ့ကား t-ရှပ်အင်္ကျီအလျှော့ပေးလိုက်လျောမယ့်ဂန္ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်း၏စံဖြတ်ကအားလုံးကိုခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားများကို fit မှခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါရှပ်အင်္ကျီအရွယ်အစားအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်: S, M, L, XL, XXL, ပင် 3XL 4XL! ။ ရှပ်အင်္ကျီစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စတိုးဆိုင်၏ဤမော်ဒယ်ရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းတကျိပ်နှစ်ပါးသောအရောင်များထက်အားလုံးအတွက်, အဘယ်သူမျှမနည်းပါးလာ။
အမှန်မှာအရောင်များမှာ - ကောင်းကင်ပြာ၊ အပြာ၊ အဖြူ၊ အနက်ရောင်၊ အနီရောင်၊ ရေတပ်၊ အစိမ်း၊ တော်ဝင်အပြာ၊
ဂျပန် 2019 အတွက်ရပ်ဂ်ဘီလောကီသားတို့သည်အခွက်ကိုမှဆက်ကပ်အပ်နှံဒီရှပ်အင်္ကျီ၏ထည်အလွန်ယဉ်ပါးဖြစ်ပါသည်: 185 g / m²။ ဒါဟာလုံးဝကြောင့်စံပြမဆိုရာသီအတွက်ဝတ်ဆင်ရန်ကိုအပူချိန်မြင့်တက်အထူးသဖြင့်လာသောအခါအရာဝါဂွမ်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဂျင်းဘောင်းဘီ, ဘောင်းဘီတို, ဘာမြူဒါဘောင်းဘီတိုသို့မဟုတ်ဂန္ဘောင်းဘီနှင့်အတူမည်သည့်အခါသမယများအတွက်ဝတ်ဆင်နိုင်မယ့်ဂန္တဖြစ်ပါတယ်။
အားလပ်ရက်များသည်အလျင်အမြန်ချဉ်းကပ်လာပြီးသင်ချစ်ရသူအတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ကိုသင်မတွေ့ရသေးသလား။ တစ်ခုမူရင်းဆုကြေးဇူးကိုလိုအပ်တယ် မွေးနေ့? သို့မဟုတ်သင်မယ့်သင့်ရဲ့ဗီရိုမှထည့်သွင်းဖို့အသစ်တစ်ခုအပိုင်းအစနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်လုပ်ကြဖို့လိုသလဲ ထို့နောက်ဂန္မှပြန်လာ!
ထို့ကြောင့်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများကတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ကြသည် t-ရှပ်အင်္ကျီ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ 2019 ရပ်ဂ်ဘီကမ္ဘာ့ဖလားကိုရည်စူးသည်။ ထို့အပြင်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းပြချက်အတွက် - သူတို့သည်အလွန်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးအမြဲတမ်းနောက်ဆုံးအခြေအနေရှိသည်။ တောက်ပသောအရောင်များကိုကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက်အရောင်တောက်ပသည့်အရောင်ကိုကြိုက်သူများအတွက်ကြားနေအရောင်များ။ သင်သည်ဘေးဥပဒ်နှင့်မတွေ့ရ စိတ်တော်တံ့သောဆုကြေးဇူးကို သင့်ရဲ့ဆိုင်ထဲမှာ sexy ရပ်ဘီ.
ထို့အပြင်ဖတ်ရန်: 2007 အတွက်ကာဒစ်ဖ်အတွက်စွမ်းရည်အပြာ
မိန်းမတို့အဘို့ "ဒီရပ်ဂ်ဘီရှပ်အင်္ကျီ, သင့်ဗီရိုတစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှု